Malcolm X ၏မိန့်ခွန်း - Afrikhepri ရန်ပုံငွေအဖွဲ့
Lမင်းနိုင်ငံကိုမင်းလိုချင်ရင်အဲဒါကိုအမျိုးသားရေးဝါဒလို့ခေါ်တယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏လူဖြူများသည်အင်္ဂလန်ကိုဆန့်ကျင်သောတော်လှန်ရေးတွင်ပါဝင်ခဲ့ကြသောအခါအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ရသနည်း။ ဒီနိုင်ငံရဲ့လူဖြူကဒီမြေကိုနောက်ထပ်အဖြူရောင်နိုင်ငံတစ်ခုတည်ဆောက်စေချင်တယ်။ ဒါဟာအဖြူအမျိုးသားရေးပဲ။ အမေရိကန်တော်လှန်ရေးသည်အမျိုးသားရေးဝါဒဖြူဖြစ်သည်။ ရုရှားတော်လှန်ရေးလည်းဖြစ်ပေမယ့်လည်းဒါဟာအဖြူအမျိုးသားရေးဝါဒပဲ။ မင်းသဘောမတူဘူးလား Krushchev နဲ့ Mao တို့ဘာကြောင့်သဘောမတူနိုင်တာလဲ။ အဖြူအမျိုးသားရေး၏။ အာရှနှင့်အာဖရိကတို့တွင်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောတော်လှန်ရေးအားလုံးသည်၎င်းတို့အပေါ်မည်သည့်အခြေပြုချက်အပေါ်အခြေခံသနည်း။ တော်လှန်ရေးသမားတစ် ဦး သည်အနက်ရောင်အမျိုးသားရေးဝါဒဖြစ်သည်။ သူဟာနိုင်ငံတစ်ခုလိုချင်တယ်။ ငါသင်းအုပ်ဆရာကလိဂ်ကလှပသောစာသားကိုဖတ်နေသည်။ သူကဤမြို့ရှိမည်သူမဆိုနှင့်မရနိုင်လျှင်၎င်းသည်လူမည်းသည်အမျိုးသားရေးဝါဒနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုရှင်းပြခဲ့သည်။ မင်းကလူမည်းအမျိုးသားရေးဝါဒကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်တော်လှန်ရေးကိုကြောက်တယ်။ မင်းတော်လှန်ရေးကိုနှစ်သက်ရင်လူမည်းအမျိုးသားရေးဝါဒကိုကြိုက်တယ်။
ဤအမှုကိုနားလည်နိုင်စေရန်, သင်ဒီမှာအဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ငယ်ရွယ်အစ်ကိုစဉ်းစားရမယ်, ပြည်တွင်းနှင့် negro negro အလုပ်သမားလယ်ကွင်းများအကြားကျွန်စနစ်၏အချိန်၌ရှိ၏ခြားနားချက်ကဆိုသည်။ အိမ်တွင်းကျေးကျွန်သခင်၏အိမျ၌နထေိုငျသူမြားသပါ၏ သူတို့ကကောင်းစွာဝတ်ဆင်ခဲ့ကြသည်သူတို့ကမာစတာအဖြစ်ကျွန်တော်စားမိပါသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူတို့ဘာသူမဟုတ်နိုင်, ကောင်းစွာစားရကြ၏။ သူတို့ကထပ်ခိုးသို့မဟုတ်မြေအောက်ခန်းထဲမှာနေထိုင်ခဲ့ပေမယ့်သူတို့ကမာစတာအနီးနေထိုင်ခဲ့; သူတို့သခင်သည်ကိုယ်တော်တိုင်မိမိကိုမိမိခစျြ၏ထက်မာစတာပိုပြီးချစ်တော်မူ၏။ သူတို့ကပိုပြီးလိုလိုလားလားမာစတာသူ့ကိုယ်သူထက်မိမိတို့သခင်၏အိမ်တော်ကိုကယ်တင်သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုအပ်ပေးတော်မူ၏။ မာစတာကပြောသည်ဆိုလျှင်, "ငါတို့ကောင်းတစ်ဦးနေအိမ်ရှိသည်," ဟုအဆိုပါ negro ကျွန်သည်ဟုတ်ကျနော်တို့အကောင်းတစ်ဦးနေအိမ်တို "ဟုပြောသည်။ "ဟုအဆိုပါဆရာကပြောသည်တဲ့အခါမှာ" ကျွန်တော်တို့ဟာ "ဟုသူကပြောသည်။ " " ဒါကပြည်တွင်း negro အသိအမှတ်ပြုရာဖြစ်တယ်။
အိမ်တော်မာစတာမာစတာကိုယ်တော်တိုင်ထားထက်ပိုမိုစွမ်းအင်နှင့်အတူပြည်တွင်း negro တိုက်ပွဲများမီးကိုမီးရှို့ခံခဲ့ရလျှင်။ မာစတာနေမကောင်းတယ်ဆိုလျှင်, ပြည်တွင်း negro ကျွန်တော်နေမကောင်းသူရှိပါတယ်ဘာသူဌေးက "ဟုမေးသော်, "သူကသူ့ကိုယ်သူနှင့်အတူဖော်ထုတ်မိမိသခင်ထက်ပိုမိုကျွမ်းကျင်ဖို့ကိုယ်တော်တိုင်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ တဖန်သင်တို့ဟု negro ကျွန်ကိုရှာတွေ့သင့်တယ်လိုလျှင်, လူ, ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ "ကျွန်တော်တို့ကိုဤအိမျကိုစွန့်ခွာ Save, ကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ရန်" ဟုအဆိုပါ negro ကျွန်သည်မျှော်ကြည့်ခြင်းနှင့်သင်သည်အရှုးနေ "replied ဤအိမျကိုစွန့်ခွာ? သငျသညျဒီတစ်ခုထက်ပိုကောင်းတဲ့အိမ်သူအိမ်သားသိသလား ဘယ်မှာငါကဒီမှာထက်ပိုကောင်းဆစ်ဖြစ်ပါ့မလား အဘယ်မှာရှိပိုကောင်းကဒီမှာထက်ကျွေးမွေးမလဲ "ဒါကဘာ negro ကျွန်ကိုပါပဲ။ အဲဒီအခြိနျမှာ, "အိမ်သူအိမ်သား nigger ။ " ဟုခေါ်ခဲ့သည် ဒီတော့ကျနော်တို့ရှိသေးသေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယနေ့ခေါ်ဆိုပါ။
သူ့သခင်ကဲ့သို့ negro ကျွန်သည်။ သူကသူနှင့်အတူအသက်ရှင်ရန်လိုသည်။ ဒါဟာသူ့ကိုသူ့သခင်နှင့်အတူအသက်ရှင်ဖို့နေထိုင်သောအိမ်၏သုံးကြိမ်တန်ဖိုးကိုပေးဆောင်မည်အကြောင်း, ဖြစ်ခြင်း၏ဝါကြွားသွားပါပြီးရင် go ရန် "ကိုသာအနက်ရောင်အစက်အပြောက်။ " "ကျွန်မရဲ့ပါတီအတွင်းတစ်ဦးတည်းသာမိပါတယ်။ "သင်တစ်ဦး negro ကျွန်ဖြစ်၏" ကျွန်မ ... ဒီကျောင်းကိုအတွက်တစ်ဦးတည်းသာမိပါတယ် "။ "သင်ဤအိမျကိုစွန့်ခွာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ: တစ်စုံတစ်ဦးကဆိုအချိန်ကိုမှကြွလာလျှင်" ရဲ့ဤအိမျကိုစွန့်ခွာကြကုန်အံ့, "သင်ပြည်တွင်း negro စိုက်ခင်းဖြေဆိုအတိအကျအဘယ်အရာကိုသူ့ကိုဖြေဆို? အမေရိကကနေသီးခြားဒီအဖြူသတ္တိ အကယ်. ? သို့မဟုတ်သင်သင်ဒီမှာရှိထက်ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်အရှာရမလဲ? "ဟုတ်တယ်, သောသင်အဘယ်သို့ပြောသည်ကိုပါပဲ။ သင်တို့မူကား, အာဖရိက၌သင်တို့၏စိတ်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။
အဆိုပါစိုက်ခင်းတွင် negro အလုပ်သမားလည်းရှိ၏။ အလုပ်သမားများ Negroes ကထုဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါလူမည်းနေဆဲအိမျတျောကိုလှည့်ပတ်လယ်ကွင်းတွင်ပိုမိုများပြားခဲ့သညျ။ အဆိုပါ negro အလုပ်သမားငရဲတစ်ဦးဘဝကိုဦးဆောင်ခေါ်သွားပါတယ်။ သူကစားကြွင်းစားကျန်ကိုစားကြ၏။ ပြည်တွင်း Negroes ဝက်သားရဲ့အကောင်းဆုံးအပိုင်းပိုင်းကိုစားကြ၏။ လယ်၌ဖြစ်သော negro ယနေ့သတ္တဝါလို့ခေါ်တဲ့ဝက်၏အူ၏အကြွင်းအကျန်ပေမယ့်ဘယ်အရာကိုမျှမရှိခဲ့သည်။ အဲဒီအခြိနျမှာသူတို့က၎င်း၏စစ်မှန်သောနာမကိုအမှီ GUTS ကတောင်းဆိုထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် tripe စားခဲ့ကြသည်ယျ။ တဖန်သင်တို့အချို့ကိုနေဆဲ tripe စားမယ့်နေကြသည်။
အဆိုပါ negro လယ်ကွင်းညနပေိုငျးမှနံနက် မှစ. လုပ်ကြံသဖြင့်, သူကတစ်ဦးတဲအတွက်တစ်ဦးလာပြီးအတူတူနေနေကြပါတယ်တှငျနထေိုငျ; သူမရှိတော့စေချင်ကြောင်းအဟောင်းအဝတ်ဝတ်ဆင်။ သူကသူ့သခင်ကိုမုန်း၏။ ဟုတ်တယ်, သူကမုန်း၏။ သူကစမတ်ခဲ့သည်။ သူ့သခင်ကဲ့သို့ negro ကျွန်ပေမယ့် negro လယ်ကွင်းများနှင့်ကအများစုမာစတာမုန်း၏ခဲ့တာမှတ်မိသေးတယ်။ အိမ်သူအိမ်သားကိုမီးရှို့ခံခဲ့ရသည့်အခါသူသည်မီးကိုထည့်ဖို့ကြိုးစားနေမခံခဲ့ရ: အ negro လယ်ကွင်းသူတစ်ဦး gale လာ. , ဆုတောငျးလကျြ။ မာစတာနေမကောင်းတယ်သောအခါ, negro လယ်ကွင်းသူ့ကိုအသေခံရန်အဘို့ဆုတောင်း။ တစုံတယောက်သောသူသည်, ပြောပါရန် negro လယ်ကွင်းကိုတွေ့ဖူးပါလျှင် "ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကို Save, ဤအိမျကိုစွန့်ခွာကြကုန်အံ့" ဟုသူကဘယ်မှာသွားပါရန် "မဖြေခဲ့တာလဲ "ဒါပေမယ့်" ဘာမှမယ့်အစားဤအိမျတျော။ "ဒီနေ့မရေိကလယ်ကွင်း negro အတွက်ရှိပါသည်။ ငါတဦးတည်းဖြစ်၏။ ထု Negroes ၏လယ်ရေးစပ်နေကြသည်။ သူတို့ကအဖြူမီးရှို့အိမ်တော်ကိုမြင်သောအခါ, သင်ကမှောင်မိုက်တဲ့စကားပုံ, "ကျွန်ုပ်တို့၏အစိုးရစဉျးစားကွညျ့ငယ်အနက်ရောင်" ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရဒုက္ခ၌တည်ရှိ၏ "ဟုပြောနားမထောင်ဘူး! ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာကာသယာဉ်မှူး "," ကျွန်ုပ်တို့၏ရေတပ် "ငါသည်ပင်များထဲမှပွောကွားရ"! "ဒီကသူ့စိတ်ကိုပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သူတစ်ဦးကအနက်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုအချိန်ကမာစတာသည်လယ်ကွင်းများ negroes များကိုသူ၏လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်ထားရန် Tom Neg ကိုအိမ်တွင်း negro ကိုအသုံးပြုခဲ့သကဲ့သို့ယခုအဟောင်းသည် Uncles မှလွဲ၍ အခြားအရာများမဟုတ်သော negroes များကိုအသုံးပြုသည်။ ၂၀ ရာစုတွမ်၊ မင်းနဲ့ငါတို့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုငြိမ်းချမ်းစွာအကြမ်းမဖက်ဘဲဆက်ထိန်းထားစေဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုချုပ်ကိုင်ထားစေပြီးလက်ထဲမှာရှိနေစေ။ Tom ကမင်းကိုအကြမ်းမဖက်အောင်လုပ်တဲ့သူပဲ။ သွားဆရာဝန်ဆီသွားပြီးသူကမင်းကိုသွားဆွဲထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာ။ သူစတင်ပစ်တဲ့အခါသင်ရုန်းကန်ရလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်သူကသင့်ကိုမေးရိုးထဲမှာ novocaine လို့ခေါ်တဲ့ထုတ်ကုန်ကိုသင့်ရဲ့ပါးစပ်ထဲထိုးသွင်းလိုက်တယ်၊ ဒါကသင့်ကိုအန္တရာယ်မဖြစ်စေနိုင်ဘူးလို့ထင်စေတယ်။ မင်းရဲ့ထိုင်ခုံမှာနေပြီးမင်းမှာဒီ novocaine အားလုံးသင့်ပါးရိုးထဲမှာရှိနေလို့မင်းဟာငြိမ်သက်ခြင်းကိုခံစားနေရတယ်။ သင့်မေးရိုးကနေသွေးတွေစီးဆင်းနေတယ်၊ ​​ဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကိုငြိမ်းချမ်းစွာဆင်းရဲဒုက္ခခံရဖို့သင်ကြားခံရလို့ပါ။ [Wpdiscuz-feedback id =” iznyj94zxr” question =” သင်ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ” open =” 1″] [/ wpdiscuz-feedback]
Malcolm X ကို, အနက်ရောင်ပါဝါ
8 €ကနေ 11,90 အသစ်
9 € 11,00 ကနေအသုံးပြုခဲ့သည်
€ 11,90 ကိုဝယ်ပါ
စက်တင်ဘာလ 24, 2020 5:01 pm တွင်၏အဖြစ်